Home » Toerana fitsangatsanganana » Nisondrotra ny fizahan-tany any Polonina tamin'ny taona 2018
2018 dia taona tsara ho an'ny sehatry ny fandraisana vahiny any Polonina. Raha ny angom-baovao farany, ny ankamaroan'ny Poloney dia nisafidy ny hiala sasatra teto amin'ny firenena tamin'ity taona ity. Tamin'ny taona 2018, mihoatra ny antsasaky ny mpizahatany nanapa-kevitra ny hamonjy tanàna poloney. Ny hafa matetika dia nisafidy an'i Hongrie, Slovakia ary Kroasia mpifanolo-bodirindrina aminy matetika.
Nahomby indrindra ny fialantsasatra. Ny fahavaratra mafana dia midika fa ny Poloney dia vonona handoa taha ambony amin'ny fialantsasatra any amin'ny Ranomasina Baltika. Raha ampitahaina tamin'ny tamin'ny taon-dasa, ny vidin'ny trano tamin'ny volana jolay tany amin'ireo tanàna amoron-dranomasina voafantina dia nitombo hatramin'ny 75%. Na dia latsaka aza ny vidin'ny volana aogositra dia mbola ambony noho ny tamin'ny taon-dasa izy ireo.
Tamin'ny fahavaratra, ny Tri-City no be mpitia indrindra, na izany aza, nandritra ny taona rehetra, dia toeram-pialantsasatra sy tanàna lehibe no naka fanahy indrindra ireo mpizahatany. Tamin'ny taona 2018, matetika ny Poloney no nitsidika an'i Zakopane - hatramin'ny 23% amin'ny famandrihana rehetra, Kraków - 12%, ary Wrocław, Karpacz na Warsaw (4-5%). Raha ny eto an-drenivohitra dia nitombo hatramin'ny 191% ny isan'ny famandrihana raha ampitahaina amin'ny taona 2017. Na izany aza, tsy niova ny toetoetran'ny dia toy izao: matetika dia fiatoana roa heny amin'ny faran'ny herinandro.
Ny mpitrandraka hotely koa dia namporisihina tamin'ny fianjeran'ny tany am-boalohany. Ny mpizahatany dia nahazo tombony tsy tamin'ny toetrandro mahafinaritra ihany, fa tamin'ny vidiny ambany ihany koa noho ny tamin'ny vanim-potoana feno. Na izany aza, ny salan'isa famandrihana ho an'ny fararano 2018 dia 1048 PLN. Ny lisitry ny famandrihana ambony dia nanjakan'i: Zakopane, Kraków, Karpacz, Wisła ary Białka Tatrzańska. Fifamoivoizana marobe ihany koa no voarakitra ao amin'ny Bieszczady, izay nitombo laza tato ho ato.
Ary farany, ny hetsiky ny Taom-baovao - ny vidin'ny vanim-potoana avo lenta amin'ity taona ity dia nitombo be, raha oharina amin'ireo tsy vanim-potoana. Ny fiakaran'ny vidiny dia 75% -100% teo ho eo, amin'ny tranga sasany aza mbola betsaka kokoa. Ny salan'isan'ny fijanonana mandritra ny herinandro vaovao ho an'ny olona roa any Zakopane dia 2282 PLN, ary ao Karpacz 1690 PLN.
Ny fihotsahan'ny tany mihotsaka dia mahafaty olona dimy farafaharatsiny ao Filipina